Cafis Madaxweyne oo loo fidiyay in ka badan Sadex Boqol oo Maxaabiis ah | Allbanaadir.com
Home NEWS Cafis Madaxweyne oo loo fidiyay in ka badan Sadex Boqol oo Maxaabiis...
Cafis Madaxweyne oo loo fidiyay in ka badan Sadex Boqol oo Maxaabiis ah
Madaxweynaha maamulka Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegto uu soo saaray cafis Madaxweyne ugu fidiyay in ka badan 300- oo Maxaabiis dambiyo kala duwan galay, kuwaa oo ku xiran xabsiyo kala duwan oo kuyaala deegaanada Somaliland.
Wareegtada uu soo saaray Madaxweynaha Somaliland ayaa lagu sheegay in munaasabada 18-ka May owgeyd cafis Madaxweyne ugu fidiyay Maxaabiista dambiyada fudud galay oo gaaraya 365 Maxbuus.
Halkan ka Akhriso Wareegtada cafiska Madaxweyne
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegto madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/XM/WM/222-509/052020, Cafis Guud u fidiyo, Xuska Maalinta 18-ka May darteed, Maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan.
In laga bilaabo taariikhda maanta aan Cafis Guud u fidiyo, Xuska Maalinta 18-ka May darteed, Maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan, oo tiradoodu dhan tahay 365 (Saddex Boqol iyo Shan iyo Lixdan) maxbuus. Cafiskani saamayn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raadka ciqaabeed ee ka dhalanaysa dembiyadda ay ku xukunnaayeen, sida ku xusan qodobka 92 ee Xeerka Ciqaabta Guud. Waxa cafiskan fulinaya Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, iyada oo la raacayo liiska Maxaabiista.
Previous articleSaid Mohamud: U.S. aid needed to save Somalia
Next articleMadaxweyne Trump oo isticmaalay Daawo marar badan ay ka digeen dhaqaatiirta